Kiiska Ku Xidhnaanshaha Mobilada | Martech Zone
Dacwadda Tayaynta Mobilada
Arbaco, Juun 10, 2013 Kelsey Cox
Kicinta mobilada ayaa beddeleysa oo keliya sida dadku u wada xiriiraan, laakiin sida ay u nool yihiin, u shaqeeyaan iyo u dukaamaysanayaan.
Sidaad horeba u ogayd, kobaca isticmaalka aaladda moobaylka wuxuu ku faafay sida dabka duurka sanadihii la soo dhaafay. Khubarada ayaa rumeysan in tirada aaladaha mobilada ay gaari doonaan 7.3 bilyan marka la gaaro sanadka 2014, iyagoo xaqiijinaya inuu jiro kacdoon mobilo socda. Suuqgeeyayaasha, waa dagaal ama duulimaad: sidoo kale waxaad isku duubnaataa dhaq-dhaqaaqa oo aad la qabsataa istiraatiijiyaddaada internetka si aad ugu haboonaato adduun shaashad badan leh, ama aad dhiibto hubkaaga oo aad la kulanto gaabis, laakiin hubaal dhimasho
Sida laga soo xigtay Mashable, 2013 waa "sanadka naqshadeynta websaydhka jawaabta leh," taas oo sii wadaysa baahida loo qabo degellada iyo barnaamijyada si loo wanaajiyo shay kasta iyo dhammaan cabbirka shaashadda. Iyadoo 90% dadku isticmaalaan shaashado badan oo isdaba joog ah, iyo 67% dadka wax iibsanaya oo ka bilaabaya hal qalab isla markaana ku dhammaystiraya iibsigooda qalab kale, baahida loo qabo khibradda dareeraha ayaa muhiim ah.
Halkan waxaa ku yaal muuqaal buuxa oo ku saabsan xogta Hel Qanacsanaan:
Tags: Suuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkahagaajinta mobiladaHagaajintaNaqshad wax ku ool ahnaqshadeynta websaydhka
Falanqeynteyda: Google Analytics ee iPhone